Afhayeenka Golaha Sare ee Ahlu Sunna Waljaamaca oo beeniyey in ay dagaalanto ahlu suna wal jameeca ,
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow wuxuu sheegay in Somali ay noqotay kuwa xabadi disho .mid baahi ay disho .mid madfac lagu riday mid ku sumoobay biyaha bada .kuwo dagaanadodii ka barakacay isaga oo yiri qaransomaliyeed sidaa ma anfacayso horumarna laguma gaari karo
Afhayeenka Golaha sare ee culu’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow “Waxaan aad iyo aad u canbaaraynaynaa bucad badeeda iyo qashinka lagu shubayo biyaha somaliya waxana caalamka ka codsanenaa in ay dadajiyaan in la dhiso qaran somaliyeed oo ciidankiisu hanan karaan maamulka badda iyo bariga si somalidu dhibatada uga baxaan ,gobolkuna uu u nabdoonaado “
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Cqaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow.
xaalada uu dalku marayo xilligan, iyo dagaalada ka dhacayo deeganada dhoobley iyo guri ceel ee dalka somaliya isagoo ugu horeyntii baaq u jeediyey dhinacayada ku dagaalamayo degaanada gobolada dhexe iyo kuwa koofureed oo ay ka mid ka yahiin dagmada guri ceel iyo dhoobleey wuxuuna beeniyey in ay wax lug ah ku leeyihiin firqada ahlu sunna waljameeca dagaalada ka dhacayo dagmada guri ceel ee la shegayin ay iskaga soo horjeedaan xarakada alshabaab iyo ahlu sunna wal jameeca oo uu sheegay in aysan raali ka aheyn in qof la dilo ururkasta oo uu ku jiraba isla markaana uu jadwalkoodu ku jirin in wax la dilo
Sh soomoow “waxaan cod dheer ku leenahay waa in la joojiyaa dagaalada ka dhacayo dalka gudihiisa meel kasta ay ahaataba
“Aqon yaahanka iyo waxgaradka somaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo inta shacabka ka naxay waxaan ugu yeeraynaa in somalida la daba qabto “
Afhayeenka ayaa seegay in ahlu suna wal jameeca ay san jirin cid ay kala dhaxayso cadaawad in ay san jirin dagaal ay cid kuqaadayaan sidaa si la mid ah uusan jirin dagaal ay cid kula jiraan ,dadka ku been abuuranayo ahlu suna wal jameeca waa naqaa iyaguna wa anayaqaanaan ee ha iska daayaano “
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow”waxaan idiin sheegaynaa ahlu suna waljameeca hadaan nahay horey dagaal aan uga qeyb qaadanay ma jiro ,hadana dagal aan ku jirno ma jiro in ahlu suna la dilo raali kuma nihin qofkasta oo urur ku jira in la dilo raali kuma nihin gaar ahaan dagaalada hada ka socdo guriceel ee la yiri waxay u dheaxeeyan al shabaab iyo ahlu suna waxaan leenahay waxaasu wax jira maaha shaqana kuma lihin “
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow”Meesha dad qaraabo ah ayaa ku dagaalamayo waxaana ku jira siyaasada dibada ah ahlu sunah madax ayey leedahay gudoomiye ayey leedahay gole dhexe iyo gudi fulin ayey leedahay afhayeen ayey leedahay xeerka ahlu suna waxaa ka mabnuuc ah dagaal wax la yiraahdo “
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow ayaa maanta shir Jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu uga hadlay xaaladda dalka uu
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow Wuxuu sidoo kale sheegay in hadii ay howshu sidaa ku socoto ay ka sii dari doonto wuxuuna xusay in somaiya ay xubin buuxda ka tahay urur goboleedka Midowga Africa Igad .Jaamaca carabta ururka islaamka qaramada midoobey iyo ururo kale oo aan dowli aheyn dhamaan tood waa wada layaceen wuxuuna ugu baaqay in si dhab ah loogu so gurmado
Wuxuuna calaamka ugu mahadceliyey in ay wax taraan wuxuuna sidaa si la mid ah ugu baaqay somalida in ay heshiiyaan
Afhayeenka Golaha sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh C/qaadir Sh. Maxamud Abuukar Soomow wuxuu ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka socdo dhobley dhamaan waxaan leenahay dalka oo dhan yaan xabad danbe laga ridin isaga oo tusaale u soo qaatay in biyo daatay dabaadigooda la qabto .
Dhinaca kale Afhayeenka Golaha Sare ee Ahlu Sunna Waljaamaca waxa uu sheegay inay aysan banaaneen